Waa maxay music YouTube iyo YouTube ka dhigi doonaa sida aad Source Music Personal
Waa maxay YouTube Music iyo waxa ka dhigi doonaa sida Personal Music Source
1. Maxaa YouTube music
2. Maxaa la samayn karaa iyadoo youtube music
3. TunesGo - YouTube sida il music shakhsi
1. Waa maxay ee YouTube music
YouTube Music waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo adeegyada ugu horumarsan in la soo bandhigay by Google iyo YouTube wada. Waa adeeg geeyo a magaca kaas oo sidoo kale la bedelay si muhiim ah YouTube Music. Adeegyada arrintan la xiriira ma aha gobolka kaliya ee farshaxanka, laakiin dadka isticmaala ayaa sidoo kale la hubiyo in sifooyinka ugu wanaagsan ayaa sidoo kale ku riyaaqay. Muhiimka ah music ayaa sidoo kale waxa loo arki karaa adeeg dheeraad ah sida adeegyada music hadda YouTube lagu ordo fledge buuxa tan iyo maalintii YouTube ayaa la wareegay Google. Feature ugu fiican ee adeegyada waa in dadka isticmaala ay sidoo kale ay awoodi karaan in ay abuuraan, badbaadin iyo maarayn playlists ku saabsan iyaga u gaar ah oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
YouTube music Music aka muhiimka ah waa adeeg geeyo ah oo uu soo bandhigay by Google iyo hoosaad sida YouTube. Marketing Adeegga waxaa sidoo kale la sameeyey by YouTube iyo audio ka mid ah sababta hoorto oo kaliya adeega waa wax hubsato in adeegga ayaa weli ku jirta gacanta dadka isticmaala ay ka dhigi lahaa. Key Music sidoo kale isku adeegyada video geeyo oo la marti video marti domain ee website-ka. Daah-xadidan la sameeyey bishii November 2014 iyo nooca buuxda ie Music Key Beta laga heli doonaa 2015. Ma jiri doonto kharashka dheeraadka ah ee adeega iyo adeega loo wadi doono oo lacag la'aan ah u dhan iyo macaamiishu hadda jira iyo sidoo kale.
Music playlist loo arki karin, keydinta online oo ka mid ah heesaha oo kale videos by isticmaala si cadcad waxaa laga daawan karaa hal meel wadajir. Tani waxay ka badbaadisaa user ka raadinaya markii heeso iyo mar kale oo aan ku koobnayn YouTube laakiin dhammaan adeegyada music caan hubiyo in habkaani waxaa la siiyaa sameeyo. Marka ay timaado in YouTube markaas waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in adeegga waa lacag la'aan iyo in kaliya qasabno yar user waa ay awoodaan in ay abaabulaan oo aan wax arrin oo ka kaaftoomi music ah.
3. maktabadda music YouTube
Maktabadda music ama maktabadda audio ee adeegga laga heli karaa https://www.youtube.com/audiolibrary/ music taas oo ka dhigaysa hubiyo in user ku dari kartaa heesaha videos in lagu uploaded in YouTube aan ka kaaftoomi kasta oo ay hubiyo in arrinta copyright waxaa waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira. User ayaa soo bixi kartaa oo dhan kuwan raadkaygay haddii uu doonayo inuu iyo sidoo kale hubin karaa in in tareenka ayaa la abaabulay offline. Waxa intaa dheer in ay caanka ah ee dhan tareenka ayaa sidoo kale waxaa halkaas ku qoran taas oo ka dhigaysa nidaamka u fududahay si user dooran oo keliya kuwa oo uu u malaynayo in la jeclaan lahaa by dadweynaha guud oo dhan.
4. ciyaaryahan music YouTube
YouTube sii wadaan in ay soo bandhigaan tiro ka mid ah qaababka marka ay timaado Music Key inviter cusub adeeg oo kaliya in laga bilaabi lahaa ee 2015. Adeeggu wuxuu la iman doonaa codsi ah in dhaqmaan lahaa ciyaaryahan video ee telefoonada gacanta ah iyo waqti isku mid ah u lahaa sidoo kale in la hubiyo in ciyaareed asalka iyo adeegyada offline ayaa waxaa sidoo kale la siiyaa dadka isticmaala ee arrintan la xiriira. Markii hore ka soo saarney 30 million song la sii dayn doono oo ka mid ah adeegyada audio iyo video iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in adeegyada la heli karo in tiro kooban oo dalalka dunida oo dhan loo ballaarin lahaa dhererka waqtiga lahaa. Adeegga ciyaaryahan geeyo caadi ahaan lahayd oo lacag la'aan ah, laakiin waxaa loo gundhig lahaa xayeysiis. Marka ay timaado in adeegyada caymiska ka dibna waa in la ogaadaa in adeegga lagu soo oogi doono $ 10 / bishii.
5. abaalmarinta music YouTube
Oo loo soo gaabiyo sida YTMA abaalmarinta la siiyo sannad kasta si sharaf music video ah ugu fiican in la soo uploaded in YouTube. Abaalmarinta ayaa bilaabay sannaddii 2013 iyo mid kasta oo sanadkii 90 daqiiqo waxaa loo qoondeeyaa abaalmarintan taas oo fanaaniinta caanka ah qabtaan. Abaalmarinta ayaa waxaa la qaataa oo ku saabsan raadka, views, mobilada iyo hawlgelinta.
6. YouTube music copyright
Waxa kale oo loo arki karaa nidaamka content ID in hubiyaa in dadka oo dhan videos in isticmaalayso music copyright waxaa lagu sifeeyo soo baxay oo laga saaro Youtube ka. Marka arrinta laga helay abuure asalka ka dibna uu leeyahay oo dhan xuquuqda video iyo xannibi karaa video ah in la arko ama xidhi audio ah. Content ayaa sidoo kale la monetized karo.
Waxaa jira tobanaan kun oo downloader music ee suuqa. Ka dib markii yihiin xiriirka to top 5 iyaga ka mid ah:
Waxa aan la music youtube samayn kartaa
1. raadso cadcad
Soo socda waa habka arrintan la xiriira:
i. URL ayaa https://www.youtube.com/playlist?list=PLB90DC9FE5C3AE56B waa in ay soo booqdaan si ay u helaan in ay qaybihiisa:
ii. User ayaa markaas uu leeyahay si loo hubiyo in mid ka mid ah heesta gudahood page waa la ciyaaray iyo nidaamka halkan hasa
2. Dhegayso online
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL ee goobta ugu weyn waxaa browsed ie www.youtube.com "
ii. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in keywords waxaa lagu baadhay iyo natiijada waxaa loo bixiyay:
iii. The video la doonayo ka dibna si fudud loo daawan karo,
Geedi socodka waa mid aad u fudud in ay raacaan oo soo socda waa mid ka mid dhamaystiran arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL https://www.youtube.com/playlist?list=PL63F0C78739B09958 waa in ay soo booqdaan:
ii. The videos of music lagu soo bandhigi doonaa oo mid kasta oo la riixi kartaa si aad u ciyaaro si fudud:
Dajinta ee videos waa mid aad u fudud. Geedi socodka waa in la raaco waxa lagu tilmaamay sida hoos ku qoran:
i. Website ugu muhiimsan waa in la furay:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in keywords ku habboon ayaa la geliyo si natiijada ku soo kacay,
iii. Marka video la doonayo waxaa lagu ciyaaray URL waa in la soo guuriyeen iyo dhejiyo in bar ee goobta kale taas oo http://en.savefrom.net/ sida ay tahay downloader YouTube ah:
User ayaa markaas u baahan yahay inuu soo bixi qaab la doonayo in ay ku dhameysan nidaamka:
The videos music caanka ah waxaa sidoo kale lagu heli kartaa iyo habka loo raaco waa sida soo socota:
i. URL ayaa https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgquLnL59alCl_2TQvOiD5Vgm1hCaGSI waa in la browsed si aad u hesho bogga doonayo:
ii. Mid kasta oo ka mid ah video la riixi karo inuu ka ciyaaro music in in uu yahay caanka ah ee YouTube,
TunesGo - YouTube sida il music shakhsi
Wixii TunesGo caanka ah geeddi-socodka waa in la raaco lagu sharaxay hoos ku qoran:
i. Ka dib markii barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay waddada in la raaco waa Baro> Online music. YouTube waxaa markaas in la furay in browser iyo URL waa in la soo guuriyeen:
ii. Sanduuqa cagaaran waa markaas in loo isticmaalo si loo hubiyo in URL la dhejiyo:
iii. Qaab la doonayo dibna waxaa lagu qaadan karaa mar video la qabtay iyada oo URL in la soo dhejiyo oo dhameystiray habka buuxda.
> Resource > YouTube > Waa maxay YouTube Music iyo Samee YouTube sida Personal Music Source